FAQs - Suzhou Funncycle Intelligent Technology Co., Ltd.
Ny vidin-tsika dia azo ovaina arakaraka ny fanamboarana ny ebikes sy ny anton-javatra amin'ny tsena hafa. Handefa anao ny lisitry ny vidiny nohavaozina aorian'ny hifandraisan'ny orinasanao anay raha mila fanazavana fanampiny.
Eny, takianay ny kaomandy iraisam-pirenena rehetra mba hanana fatra farafahakeliny mitaky farafahakeliny. Tongasoa eto amin'ny maha mpivarotra na mpandraharaha anay.
Ho an'ny santionany dia 15 andro eo ho eo ny fotoana fitarihana. Ho an'ny famokarana betsaka, ny fotoana itarihana dia 30-60 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Ny fotoana itarihana dia nanjary nahomby rehefa (1) nahazo ny petra-bolanao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay, azafady mba andefaso ny takiana amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Adiresy: Trano fananganana No.5, làlana 189 Qianjin Atsinanana, Tanàna Kunshan, faritanin'i Jiangsu, Sina
Telefaona: +86 18662651800